फेसबुक एकाउन्टमा जति धेरै साथिहरु भएतापनि आफूले पोस्ट गरेको स्ट्याटस वा फोटोमा निकै कम लाईक आउँदा दिक्क हुनुभएको छ ? यसको कारणहरु : कि त तपाईका साथिहरुले तपाईलाई वास्ता गर्दैनन कि त तपाईको स्ट्याटस् उनीहरुको News Feed मा देखिदैँनन् । तैपनि अब चिन्ता चाहिँ नलिनुस् , तपाईले आफूले फेसबुकमा पोस्ट गरेका स्ट्याटस् र फोटोमा टन्नै लाईक कसरी देखाउने ???
मैले यहाँ कुरा गर्न खोजेको likelo.com को बारेमा हो, जसबाट तपाईले एउटा status वा photo मा ४०/४५ देखि १००/२०० सम्म लाईक सित्तैमा पाउनुहुनेछ ।
सबैभन्दा पहिले तपाईले फेसबुकमा subscriber फिचर enable गर्नुपर्छ । जसको लागि यहाँ गएर गर्न सक्नुहुन्छ ।
आफ्नो स्ट्याटस् वा फोटो अपलोड गर्नुहोस् । पोस्टको प्राईभेसी Public बनाउन नबिर्सनुहोला ।
त्यसपछि ब्राउजरमा www.likelo.com खोल्नुहोस् । त्यहाँ तपाईले “Click Here” लेखिएको देख्नुहुन्छ । त्यहाँ क्लिक गरेपछि “Xperia smart phone पेज” मा पुग्नुहुनेछ । त्यो पेजको माथिपट्टि रहेको “Install” बटनमा क्लिक गरेपछि Success म्यासेजसहितको नयाँ पेज खुल्नेछ
address bar बाट त्यो success पेजको लिँक (url) कपि गर्नुहोस् ।
पचौ स्टेप :
त्यो कपि गरिएको url लाई likelo.com को होमपेको फिल्ड मा राखेर Submit गर्नुहोस् । अब तपाईले आफ्ना स्ट्याटसहरुको लिस्ट देख्नुहुनेछ । चाहेको स्ट्याटस रोजेर Submit मा क्लिक गर्नुहोस् । तपाईले फोटो पनि रोज्न सक्नुहुन्छ । अब १/२ मिनेटपछि आफ्नो स्ट्याटस् हेर्नुहोस , टन्नै लाईक बढेको देख्नुहुनेछ । तर यसको नोटिफिकेशन भने पाउनुहुन्न । तपाईले आफ्नो स्ट्याटस लाईक गरेकाहरुको प्रोफाईल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ।
यसबाट एउटा स्ट्याटसको एकपटक मात्र लाईक बढाउन सकिन्छ तर सयौँ स्ट्याटसहरुमा बढाउन सकिन्छ ।
Try it own your risk